Kutheni le nto impuku yam ye-Onn ingasebenzi? - Faq
Eyona > Faq > Abaqhubi beempuku ze-Onn-baphendula imibuzo
Abaqhubi beempuku ze-Onn-baphendula imibuzo
Kutheni le nto impuku yam ye-Onn ingasebenzi?
Okokuqala, kuya kufuneka ukhuphe ibhetter ye-wireless yakhoimpukukwaye ulinde nje umzuzwana emva koko ufake kwakhona ibhetri kwifayileimpuku. UkubaIsalathisi semouseisekhonaandisebenziemva koko kufuneka uchwetheze 'iMSC' kwibhokisi ebalekayo yefestile yakho ekunceda uvule umphathi wesixhobo.NgoFebruwari 20 2020
i-youtube ndinayo nje impuku yam entsha iyimpuku ye-optical encinci, intsha, iyah, siza kuyivula nje, ndiza kuyizama, andazi ukuba ndingayicaphukela na le manqindi yesiqendu ndizakuzama ukuyibamba okayookay uh yiyo kwaye ndizama nje ukuyivula, owu thixo wam uyazi nje okwesibini okokay kufuneka ndibuze utata wam utvisi uzokwenza elinye inqaku emva komzuzwana nje ndizakuliseta apho okaydidheyuhokayohohokayi musa Yazi ukuba uziva kakuhle okayoh yeka onumdudeokay hayi wena nje oh oh hayi okayokay oh incinci kakhulu, apho ungenza okuninzi amanqaku e-Minecraft, ngoku ndiza kudlala iMinecraft, kungekudala ndibone uxolo oluvela eRoselava Nation uyandibona eRowlandschau ulumke kangakanani
Ndidibanisa njani nempuku yam engenazingcingo kwi-Onn?
Cinezela kwaye ubambeQhagamshelaiqhosha emazantsi eimpuku. Ukuba isixhobo sakho sinesibane esibonisa ukukhanya kwebhetri, siyakuqhwanyaza sitshintshe phakathi kobomvu noluhlaza ukubonisa ukuba isixhobo siyafumaneka. Kwikhompyuter, vula isoftware yeBluetooth. Isoftware yeBluetooth ihlala kwiPaneli yokuLawula.
Wamkelekile kuphononongo lwam lwebhodi yezitshixo engenazingcingo kwaye njenge-leave-in nano receiver kwaye isebenza ukuya kuthi ga kwii-30 iinyawo ngeenxa zonke okokuqala malunga ne- $ 25 e-US kwaye ndiyifumene nje le Walmart ijonge ezantsi ngexabiso layo u-Isaw oko abanye Iimali ezingama-30 xa wena? Ndijonge ikhibhodi ebiza ixabiso eliphantsi engenazingcingo. Ndingaya phambili ndiyokufumana le, kodwa ukuba ungumdlali weqonga ufumana ikhibhodi yokudlala apho inokubiza ukuya kuthi ga kwi-70 yeedola. Isaw One eWalmart kwaye ke imouse ibiza malunga ne-70 yeedola, kodwa njengoko benditshilo, yile Ikhibhodi engenazingcingo ehambelana neMac kunye nePC.
Ayinazingcingo, iqulethe iibhetri kwaye isebenzisa i-USB ngasemva kwebhokisi iyathetha kuphela ngokusebenzisa isamkeli kwaye njengoko ndiyazi malunga noku, ikhibhodi inoyilo oluncinci Izitshixo zokuchukumisa ezithambileyo ezinobungakanani obukhulu bokuchwetheza kakuhle Iplagi kwaye udlale okhethekileyo. akukho fakelo lwesoftware ukubuyela kwibhodi yezitshixo yokudlala ikhibhodi yokudlala ndiza kuba nesoftware Kuya kufuneka ufake amaqhosha ongezelelweyo ukuba angabikho kwikhibhodi yakho ephakathi, ke eli lixesha lam lesibini ukungabhalisi oku kuba ndinokugqibela xa uyikhupha ufumana le bhegi, isilumkiso esifanayo ukugcina kude nokufikelela kwabantwana njengengxowa? ukuba kude ukufikelela kubantwana iibhetri zilapha kule khange ndiyithathe ndiyibuyisele ngaphandle kodwa inoyilo olucekeceke.Limalunga nobukhulu bebhokisi kodwa icekeceke kakhulu Inokwenzeka ukuba ibhityile njenge-4th gen kodwa nje ukuba ufike kuwo umva uyajiya, masibone ukuba ndingakubonisa na ukuba iyabhitya ngokwenene apha, iyajiya apha, uyazi nje ukuze bakwazi ukuyenza ukhula oluncinci, ke kulungile ukuba uchwetheze kunye imiqolo inale misebenzi yokuphakamisa ukuba bayinike ukuphakama okuthe kratya, kodwa abanazo iirubhi zokubambelela ukuze ubambelele ngakumbi ukuba ucinga ukuba iphuma ebhokisini kwaye xa uyikhupha, kukho iibhetri kuyo , kodwa uyazi ukuba khange ndiyibuyise, upso naye hey, isekukhona apho ine-receiver engenazingcingo kunye nencwadana yemiyalelo epokothweni esinokujonga ukujonga kwayo okokugqibela xa ndigqibile ndiza Thetha malunga nemiyalelo ukuze i-onMouse iyilingane kwaye ine-receiver engenazingcingo ethi loo ks ngokufanayo, ngoku ungabona i icon encinci okanye into egqityiweyo apha ndinayo ixesha elide, ke thatha nje izibuko elinye le-USB kwikhompyuter yakho ukuze ndiqhubeke ndiyiplagi kwikhompyuter yam kwaye ikhompyuter mayiyiqonde. Ndizakuyenza ngoku kwaye ndijonge le ngoku kuba yinto nje encinci yento yonke ethetha konke, indlela yokubeka iibhetri, indawo yokuyibeka kunye nee-LED kwaye ithi kukho i-LED ebomvu ukukhanya kwimizuzwana eyi-10 yokutshintsha ukukhanya okubomvu kwe-LED kwimizuzwana eyi-10 imizuzu ukuba ibhetri iphantsi kwaye ukukhanya okubomvu kwe-LED kuthetha ukuba i-LED yokubhangqa icimile, ukuba idityanisiwe okanye ayiphumelelanga emva kwemizuzwana eli-10, yincwadi encinci leyo ke uya kuthi akafumani kwanto ngekhibhodi eyiyo uqobo eyiyo ubukhulu bam kwaye ihamba nayo yonke enye into edesikeni yam kwaye ihamba nezithethi zeMercury kunye neLogitech, kwaye eneneni ndizilinganisile ezi zithethi njengenqaku lam lokuqala kwinqaku lam lokugqibela, nalu uthelekiso olunentambo I-keyboard endikhe ndayisebenzisa ngaphambi kokuba ndiyifumane le ikhibhodi ye-mac endala nditsho ukuba ibibuyile ngo-20 00, ayifani nango-1980, into ngo-1980 ngo-1997 umm, kodwa uyabona ukuba kukho umahluko omncinci kubungakanani kwaye mna Awunakuthelekisa ukuba babhityile kangakanani kuba indawo yam incinci kakhulu kwidesika yam ilula kakhulu kodwa um, uyawabona amaqhosha mancinci kakhulu kwaye elona candelo lilungileyo alinawo ucingo, uyazi ukuba andinayo intambo enkulu leyo inde kakhulu ngoku ikhibhodi engenazingcingo kwaye ibambelela nje ngaphandle kokuba idesika yakho igcwele ziintambo kuba yinto enye ukuba nazo zonke iintambo eziphantsi kwedesika yakho kwaye uyazi apha ngasemva ngathi ndinayo, kodwa ukuba ubenayo uyazi ukuba kutheni uyazi apha Ikhompyuter ukuze isebenze kwaye iphantse iphindwe kathathu ubude obufanele ukuba bendawo yakho oyaziyo oyifakileyo intle, ewe, ke mandibone ukuba iyasebenza ngoku, ngoku ke undichwethezile ngaba ndizama nje ukuthatha uvavanyo , um, ukuba uyayibona ngokuchanekileyo, awazi ukuba uyayibona ithi youtube, kodwa um, ke isebenza kakuhle, akukho lag. Ndiqinisekile ukuba ungadlala iMinecraft ngayo, ngekhe kube nzima ukwenza umdlalo, kodwa ukuba unomdla wokuthenga oku kubiza i-25, ivela kwinkampani ebhaliweyo kuyo ngaphandle kokungezelelweyo kunye Uyazi ukuba yinkampani elungileyo ngenene ndiza kuvuma uh uh ewe ewe ndilibale ukubeka iqhosha lokudibanisa ke le ndawo ukuba ayiyiyo? iyasebenza kwaye inokuthi icofe le kwaye iyidibanise kwaye apha iibhetri ziyahamba apha uyibeka kwizibane zayo vula ibhetri elandelayo phaya kwaye emva koko esi sitikha lulwazi nje, yenza into enye apha, yinto nje yenani lesitokhwe njengo um othi igalelo lokuphinda uvukele kwaye athi iivolts ezintathu kunye ne-50 milliamps ezifanayo kwimouse, ke uyazi ukuba ligalelo elifanayo njengempuku kodwa ndiqinisekile ukuba ayibalulekanga kodwa ngaphezulu unezitshixo zomsebenzi kunye nevolumu yevolumu um, emva koko ndavula nje into kwikhompyuter yam eyayingeyiyo le nto ibifanele ukuyenza ukubuyisela umva-ngokukhawuleza phambili umeject ngeposi ndicinga ukuba oko kuthetha ukuba ifolda ye-adeskand ivuliwe, kodwa kuya kufuneka ucofe umsebenzi key kwaye ngoku iyasebenza, jonga ukuba ndingakubonisa oko ukuze ucofe umsebenzi kwaye ucinezele kwaye emva koko ndiza kuwuthulisa kunye ne-media vielle akufuneki ndiyibeke andiqinisekanga, kodwa um, ke luphawu oluhle, um, ndiqinisekile ukuba zikwiifowuni ezitshixwayo, kodwa zikhona um othe Izinto ezifana nokucima, uncamathisela, kwaye ibiyiyo, yeyekhompyuter yeefestile onokuthi uzibeke b ecauseit inesitshixo seewindows kwaye esizisa imenyu, ewe, yayiluphengululo lwam lwebhodi yezitshixo engenazingcingo kunye nezinye izinto oko kunokuba kubalulekile kuya kuba kubaluleke ngakumbi kwinkcazo, enkosi ngokurhuma kunye nokuthanda inqaku
Ndihlaziya njani umqhubi weempuku zam ongenazingcingo?
Kwibhokisi yokukhangela kwibar yomsebenzi, chwetheza umphathi wesixhobo, emva koko ukhethe Umphathi wesixhobo kuluhlu lweziphumo. Kuluhlu lweendidi zehardware, khangela isixhobo osifunayohlaziya, kwaye ucofe kabini igama lesixhobo. Cofa uUmqhubitab, cofaUhlaziyo loMqhubi, uze ulandele imiyalelo.
USteph: Molo kwaye wamkelekile kwi-HP Njani Kuwe. NdinguSteph kwaye ngulo Mthetho uYilwayo. Kwaye silapha ukuze sikunike iingcebiso, amaqhinga, kunye nezikhokelo rhoqo kwiiveki ezimbini ukukunceda ufumane okungakumbi kwiimveliso zakho ze-HP.
UMthetho oYilwayo: Kwisiqendu sethu sokugqibela, besikwii-HP Experts Global Meetup eSan Francisco kwaye sikulethele iingcebiso ezivela kwiingcali zethu kwiiforamu zenkxaso ye-HP. Sive okuninzi malunga Windows 10 kwi-meetup. Inyathelo: Konke beku malunga nokuba ke mhlawumbi siye kumdlalo weeGiants, sabona ezinye iipaneli zobuchwephesha, sathatha imifanekiso emininzi, ndade ndafundisa nabantu indlela yokudanisa esiswini, kodwa eyona nto ipholileyo kukuba ngexesha lethu, mna Kuthetha ukuba iPC yam ihlaziyiwe Windows 10 kodwa uhlaziye abanye babaqhubi bam.
Yilwayo: Mhlawumbi uyayenza. Nokuba unemicimbi yephedi yokuchukumisa, isikrini sokuchukumisa, iWiFi, inqaku, okanye nayiphi na le micimbi, esona sisombululo siqhelekileyo kukuhlaziya abaqhubi bakho kwiWindows 10. Kwaye ukuba awunayo imicimbi, isengumbono olungileyo ukuqhuba iiWindows Updates, ngoko nayiphi na imiba enokuvela r abaqhubi abadala baya kususwa xa uhlaziya abaqhubi abatsha.
Kwaye ngexesha usenza yonke into oyithethileyo kwi-meetup, ubusele uxakekile! USteph: Bendixakekile ndizonwabisa kakhulu! Ke, ndixeleleni ukuba ndihlaziya njani abaqhubi kunye nesoftware emva kokuphuculwa Windows 10? Yilwayo: Makhe sithethe ngokuhlaziywa komqhubi kuqala. Kulungile zininzi iindlela onokwenza ngazo kwaye siza kukubonisa iindlela ezahlukeneyo onokukhetha kuzo. Iyokuqala yiWindows Update.
Ukuqhuba uHlaziyo lweWindows kwiWindows kulula kakhulu. Ke, okokuqala, ufuna ukuqinisekisa ukuba uqhagamshele kwi-intanethi. Ukuqala uHlaziyo lweWindows kwiWindows, cofa kwi-Start menu kwaye ucofe Useto.
Useto luya kuvulwa kwaye uya kubona uHlaziyo noKhuseleko. Uhlaziyo lweWindows lubhalwe apha. Xa ucofa kuyo, uHlaziyo lweWindows yeWindows luya kuqala.
Nje ukuba uHlaziyo lweWindows yeWindows luvuleke, uya kufuna ukucofa uHlaziyo. Nje ukuba uhlaziyo lufakwe, unokufuna ukuqala kwakhona ikhompyuter yakho. Steph: Ngaba kunjalo? Ngaba ufaka nje uhlaziyo ngoHlaziyo lweWindows? UMthetho oYilwayo: Akunjalo, ndiyacebisa ukuba uphinde usebenzise uHlaziyo lweWindows yeWindows de ibonise ukuba isixhobo sakho sihlaziyiwe.
Unganqakraza Jonga uHlaziyo kwakhona ukuze uqiniseke ukuba akukho nto iyenye phaya. Nje ukuba wenze oko, ugqibile. Inyathelo: Ke ukhankanyile ukuba zikho ezinye iindlela zokwenza uhlaziyo lufakelwe.
UMthetho oYilwayo: Ewe, ke unokufaka uhlaziyo lomqhubi nge-HP Support Assistant, ndicebisa ukuba usebenze zombini uHlaziyo lweWindows kunye noMncedisi weNkxaso ye-HP kuba uMncedisi weNkxaso ye-HP unokuba nabaqhubi ngaphambi koHlaziyo lweWindows kubaqhubi ababekhona kwi-HP Support Assistant bayabandakanywa, yiza ngokuthe ngqo kwi-HP kwaye ngekhe uyenze kuHlaziyo lweWindows ngoku, ukuze uqalise uMncedisi weNkxaso yeHP kwimenyu yokuQala, ngokufanayo nendlela esiqale ngayo uHlaziyo lweWindows lweWindows. Cofa kwimenyu yokuQala, emva koko ucofe zonke iiNkqubo, skrolela ezantsi kwi-HP Uncedo kunye neNkxaso. Kwaye emva koko unokukhetha uMncedisi weNkxaso yeHP.
Ungaqala kwakhona uMncedisi weNkxaso yeHP kwinkqubo yetreyi ukuba yaqalwa ngaphambili. Uya kubona isimboli encinci eluhlaza okwesibhakabhaka enophawu lombuzo kuyo. Ukunqakraza kuya kuphehlelela uMncedisi weNkxaso ye-HP.
Xa iqala, uya kuba kwiphepha lenkxaso emva kwesikrini sokwamkela. Kwaye izixhobo zakho ziya kudweliswa apho. Emazantsi escreen seDivayisi yam, uya kubona uHlaziyo.
Isikwere se-microsoft telemetry
Ulujonga njani uhlaziyo. Kulula. Nje ukuba uyiqale le nto, uhlaziyo luya kudweliswa.
Okanye ukuba akukho hlaziyo, iya kuthi okwangoku akukho hlaziyo lukhona kuwe. Kwaye ukuba uyaqhubeka nokuba neengxaki, ungasebenzisa umphathi weDivayisi. Indlela yesithathu yokujonga uhlaziyo ukuqala umphathi wesixhobo, unokucofa ngokufanelekileyo kwimenyu yokuqala, khetha umphathi wesixhobo.
Ngoku umphathi weDivayisi ubekwe kakuhle ukulungisa into, into ethe ngqo. Ungayikhupha phi kwaye uyibuyisele umqhubi othile kwingxaki. Umzekelo ukuba unengxaki yenqaku okanye ingxaki yesandi okanye ingxaki ye-WiFi.
Ukwenza oku, emva kokuvula umphathi wesixhobo, siya kusebenzisa iadaptha yokubonisa. Njengomzekelo, siza kucofa kumakhadi emizobo. Ukucofa ekunene kwisixhobo esidweliswe apho, kule meko sibonisa umqhubi wegraphic Intel.
Kwaye phezulu kukuhlaziya isoftware yomqhubi. Ke unganqakraza Qinisekisa ukuba uqhagamshele kwi-intanethi kwakhona xa uhlaziya. Ungajonga ngokuzenzekelayo isoftware yomqhubi ehlaziyiweyo.
Nje ukuba yenzeke iya kuya kwi-intanethi kwaye ijonge uhlaziyo kwaye ifake uhlaziyo lwamva nje lweMicrosoft okanye kwi-Intel okanye kwi-HP. Iya kujonga olo hlaziyo. Steph: Ke loo nto igubungela lonke uhlaziyo lomqhubi.
Kuthekani ngesoftware kunye nohlaziyo losetyenziso? UMthetho oYilwayo: Ewe, kulo naluphi na uhlobo lwesoftware eze nePC yakho, ungasebenzisa uMncedisi weNkxaso yeHP. Iya kujonga olu hlaziyo njengoko isenza kubaqhubi. Ngoku ezinye izicelo, ezinje ngeeWindows ezinokuthi uzifake xa uqala ukufumana iPC yakho kwiVenkile kaMicrosoft, ungasebenzisa iMicrosoft Store ukukhangela uhlaziyo lwezi zicelo.
Unokukhangela usetyenziso apho. Eyona nto ibaluleke kakhulu kukuba kufuneka ube uneakhawunti yeMicrosoft ukufikelela kwiVenkile kaMicrosoft. Kodwa unokuhlaziya zonke iiapps ngale ndlela.
Yiyo leyo. Siyacebisa ukuba wenze lonke olu hlaziyo ngaphambi kokwenza enye into emva kokuphuculwa kweWindows 10. Oku kuya kunceda ukugcina iPC yakho isebenza ngokugudileyo.
Steph: Enkosi, Bill. Igorha lam. Musa ukuyifumana isentloko.
Nje ukuba uhlaziye bonke abaqhubi bakho, kuya kufuneka ulungele ukuqalisa ngazo zonke eziapps zintsha. Unokuzikhuphelela usetyenziso olufana ne-imeyile, iKhalenda, iMozulu, iiNdaba, kwaye uqalise ukusebenzisa i-Cortana. Ke masazise ukuba ikhona enye into ofuna ukuyazi malunga Windows 10.
Yilwayo: Enkosi ngokujoyina nathi namhlanje. Jonga isiqephu sethu esilandelayo kwiiveki ezimbini ezizayo ngoSeptemba 23 apho sithetha ngezixhobo ezitsha ezenziwa yiHP zokujongana nokusombulula ingxaki kwiPC yakho. Inyathelo: Ewe, awufuni kuyiphosa le.
Ke hlala ubukele kwaye undwendwele i-HP How To You. Ungasifumana kwisiteshi sethu seYouTube ku-youtube.com/howto4u okanye kwiQonga leNkxaso yeHP ku- hp.com/supportforum.
Jonga icandelo lebhlog. Sazise malunga nento ofuna ukuyiva malunga nesiqendu sethu esilandelayo. UMthetho oYilwayo: Kuhle, ndiza kunibona kwixesha elizayo bafana, hamba!
Ndiyifaka njani i-wireless driver ye mouse?
Indlela yesi-4: Phinda ufake kwakhonaUmqhubi weMouse engenazingcingo
Cinezela iWindows Key + R emva koko chwetheza “devmgmt. ...
Yandisa iimpuku kunye nezinye izixhobo zokukhomba emva koko ucofe ekuneneImouse engenazingcingokwaye ukhethe HlaziyaUmqhubi.
Kwisikrini esilandelayo cofa kwindawo ethi 'Khangela ikhompyuter yamumqhubiisoftware. ...
Cofa 'Makhe ndikhethe uluhlu lwezixhoboabaqhubikwikhompyuter yam '.
Kutheni le nto i-Onn mouse ingafaki abaqhubi?
Xa ndiyifakile kwizibuko le-USB, yayiza kufaka abaqhubi ngaphandle komcimbi kwaye undixelele ukuba isixhobo besikulungele ukusisebenzisa, kodwa nasemva koko ayisayi kuphendula kwaphela xa ndihamba okanye ndicofa. Ndizamile ukukhipha kunye nokufaka kwakhona abaqhubi bempuku kunye nabaqhubi be-USB, kwaye akukho nanye kwezo yenza umahluko.
Umxhubi fihla ingxoxo
Ngaba ikhibhodi engenazingcingo ye-Onn kunye neMouse iyasebenza?
Ikhibhodi yam engenazingcingo ye-ONN kunye nempuku ibisebenza kakuhle ngaphambi kokufaka iWindows 10. Yintoni ekufuneka ndiyenzile ukubenza basebenze kwakhona? Lo msonto utshixiwe. Ungawulandela umbuzo okanye uvote njengoncedo, kodwa awunakuphendula kulo msonto. Enkosi ngokunxibelelana noLuntu luka-Microsoft.
Ndingafumanisa njani ukuba loluphi uhlobo lomqhubi we-Onn endinayo?
Ukuba umqhubi wakho akadweliswanga kwaye uyazi igama eliyimodeli okanye inombolo yesixhobo sakho se-Onn, ungayisebenzisa ukukhangela kugcino lwethu lomqhubi kwimodeli yesixhobo sakho se-Onn. Chwetheza igama lomzekelo kunye / okanye inombolo kwibhokisi yokukhangela kwaye ucofe iqhosha lokuKhangela. Unokubona iinguqulelo ezahlukeneyo kwiziphumo. Khetha owona mdlalo ungcono kwi-PC yakho kunye nenkqubo yokusebenza.
Kutheni le nto impuku yam ene-Onn ingaphenduli?
Kulungile ke ndine-wnm wiredmouse, ndizamile ukufaka umqhubi, kodwa ayisiyongxaki leyo, imouse yam kunye nekhibhodi zisebenza kwizibuko elinye, iyayihleka into ehlekisayo kwamanye amazibuko amabini imouse yam iya kukhanya kodwa ayiphenduli kwiscreen, naziphi na izimvo? Ngaba le mpendulo iluncedo? Uxolo le ayincedanga.